Fikru Maru oo dib ugu soo laabtay Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fikru Maru oo ammaanay gabadhiisa halgankii ay u gashay. sawir: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Fikru Maru oo dib ugu soo laabtay Sweden
La cusbooneeyay fredag 18 maj 2018 kl 10.17 La daabacay fredag 18 maj 2018 kl 08.33
Dhakhtarka wadnaha Fikru Maru ayaa soo caga dhigtay garoonka dayuurradaha , kadib muddo shan sannadood ah oo uu ku sugnaa xabsi ku yaala Itoobiya oo laga sii daayay maalmo hortood.
–Waxaan dareemayaa wanaag, sida uu sheegay mar uu u warrammay war-geeyska Expressen.
-Lama rumeey-san karo, waayo horay ayaa dhowr jeer ballan looga baxay, sida uu sheegay.
Fikru Maru ayaa xabsiga Itoobiya ku jiray laga soo bilaabo 13-kii maajo 2013 illaa iyo salaasadii ina dhaaftay ee toddobaadka 15-kii maajo 2018. Horraantii waxaa lagu tuhun-sanaa laaluush, hase yeeshee waxaa dib loogu soo oogay dacwad fal argagixiso.
Toddobaadkii tagay ayaa laga masaxay dacwaddii falka argagixiso oo la xiriirtay inuu kacdoon ka bilaabay xabsi uu ku jiray intii dacwadda laaluushka lagu guda jiray. Gabadhiisa Emy ayaa u kala baqooli jirtay Itoobiya iyo Sweden halkaasina ugu geeyn jirtay cunno iyo dawooyin, maadaama uu la liitay cudurka macaanka iyo sambabbada.
-U maleeyn maayo inaan awoodi lahaa, dareenka oo keliya maahan, balse ooga ahaanba inaan subaxdii kaco. Haddii aanay iyada ahayn, waxeey qabato waad la socotaan, sida uu sheegay Fikru Maru.
Gabadhiisa Emy ayaa sidan ku jawaabtay mar ay wareeysi siisay Expressen iyada oo garoonka ku sugn.
-Run run baan aktayda ugu heeystaa, isagoo aan gacmaha ka xirreyn, aan qabin dharkii foosha xumaa xabsiga ee jaalaha, goob maxkamad la’aan, shabaq la’aan. Wax walba. Xilligii xabsigu wuu dhammaaday, sida ay sheegtay Emy oo uu dhalay Fikru Maru.
Wasiirka arrimmaha dibadda Sweden Margot Wallström ayaa soo dhowaaysay imaatinka Fikru Maru, iyadoona sheegtay in wasaaradda arrimmaha dibaddu si xoogan ugu howlanayd kiiskiisa.